Iphupha malunga nesindululo somtshato Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Isicelo somtshato ngokungathandabuzekiyo yinto ocinga ngayo malunga nexesha elide kakhulu. Nje ukuba uqiniseke ukuba ungathanda ukutshata umntu omthandayo, umbuzo omkhulu ngoku ngowokuba ingaba omnye umntu uziva ngendlela efanayo.
Ithuba kufuneka likhethwe kakuhle, kunye nendawo kunye nexesha. Ukuqala kunye nokuthandana kuyafuneka. Amaxesha ngamaxesha, iringi yokuzibandakanya ebengezelayo yenza owona msebenzi wokukholisa kunye nokuziqhenya ngokuthandana namaqabane olwalamano kwaye emva koko ubonakalise iminwe yakho yomsesane kunye namatye anqabileyo emva kwesicelo esiphumeleleyo. Nangona kunjalo, isicelo somtshato sihlala sisengozini efuna into yexabiso, kuba isibini, ewe, sinokuthi "hayi." Ke, ukuphoxeka kukhulu kwaye ubudlelwane buya kuqhekeka: imvume yomntu othandiweyo ibonelela ngesiqabu esikhulu kwabaninzi.
Ukuba uphupha isindululo somtshato, zama ukuqinisekisa ukuba ucacile malunga neemvakalelo zakho. Ngaba ungathanda ukubuza omnye umntu ukuba uyafuna ukutshata okanye ulinde ukuba babuze? Ukutolikwa kwamaphupha, kubalulekile ukuba ngubani obuza umbuzo obalulekileyo kwaye ngamanye amaxesha othusayo kunye nendlela ephendulwa ngayo.
Isindululo somtshato ayisiyamava amnandi kuphela kubomi bokwenyani, kodwa ikwanentsingiselo enkulu kuyo el mundo yamaphupha. Funda ngakumbi malunga notoliko olwahlukeneyo lwesicelo somtshato kwilizwe lamaphupha kweli candelo lilandelayo:
1 Isicelo sesimboli somtshato: elona phupha liqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ndifumana isicelo somtshato, ewe! Ukutolikwa kwamaphupha
1.2 Ukufumana isicelo somtshato kumntu ongaziwayo ephupheni.
1.3 Jonga isindululo somtshato, yintoni eza namaphupha?
1.4 Ukhatywa: «Hayi!», Kwathiwa kwisicelo somtshato.
2 Uphawu lwephupha «isindululo somtshato» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «isindululo somtshato» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «isindululo somtshato» - ukutolika kokomoya
Isicelo sesimboli somtshato: elona phupha liqhelekileyo malunga nesimboli
Ndifumana isicelo somtshato, ewe! Ukutolikwa kwamaphupha
Ukuba umntu ophuphayo ufumana isicelo esivela kumyeni okanye kumtshakazi, oku kuthetha intando yokuhlangana ngokuhambelana kunye nokoyisa nabuphi na ubunzima kubudlelwane. Ukuphupha ke ufumana umqondiso ovela kwi-subconscious yakho yokuba ubudlelwane nomfaki-sicelo bukhula ngokuqinisekileyo. Kwakhona, isicelo somtshato sinokuba luphawu lokoyika ukulahleka kunye nokungabikho kokhuseleko.
Ukufumana isicelo somtshato kumntu ongaziwayo ephupheni.
Ukuba abantu abangaziwayo bavela ephupheni, kuhlala kungabaziyo, kodwa kusenokwenzeka ukuba bazilahlile iinxalenye zobuntu bakho ezibonakala ngathi aziqhelekanga. Isindululo somtshato womntu wasemzini sihlala sibonisa umnqweno ongaziwayo wokuba unxibelelwano olusondeleyo nolomeleleyo kwesiqu sakho. Ukutolikwa, kukho ukugqagqana nomfanekiso wephupha "umtshato nabantu ongabaziyo."
Jonga isindululo somtshato, yintoni eza namaphupha?
Ukuba ingqina eliphuphayo kwisindululo somtshato, i-subconscious ibonisa ukuba utshintsho lusondele. Olu tshintsho lunokunxulunyaniswa nokulala kwaye ngokuqinisekileyo luhambelana neemvakalelo kunye nobudlelwane ebomini bokwenyani. Iimvakalelo ezinokuthi zivakale ephupheni zibonelela ngolwazi oluthe kratya malunga nenyani: Uziva ntoni ngelixa ubukele isicelo?
Ukhatywa: «Hayi!», Kwathiwa kwisicelo somtshato.
Ukwalelwa kwesicelo yi-reverie kubonisa uloyiko lomntu oluphambili lokukhutshelwa ngaphandle kwezentlalo. Isicelo somtshato esaliwe sisibini sichaza ukungazazi kodwa uloyiko olukhoyo lokwaliwa. Ukuba isicelo somtshato saliwe ngumphuphi ngokwakhe, oku kuthetha ukungqubana kubudlelwane kunye nesibini.
Uphawu lwephupha «isindululo somtshato» - ukutolikwa ngokubanzi
Isimboli yamaphupha "isindululo somtshato" esiqulathwe kutoliko lwamaphupha. Ukuziva uxanduva kunye nentando yokutshintsha. Ukuba isicelo somtshato senziwe komnye umntu ephupheni, sibonisa umnqweno wobudlelwane obuzinzileyo, kodwa kunye nesidingo sokubonisa ulonwabo kuye wonke umntu.
Ukuba umphuphi ngulo ucela isandla seqabane, ubonakalisa ngengqondo yokutolikwa kwephupha kwelinye icala ukuba uzimisele ukuthatha uxanduva: ngothando, kodwa nakwezinye iinkalo zobomi.
Kwelinye icala, uphawu lwephupha lokuzinikela lukwathetha ukuba ukuphupha kuyakhathala ngento ethile kwaye akafuni kuphulukana nayo: uya kuyenzela yena. ukusondelelana ngokweemvakalelo y uzinzo nikela inkululeko yakho. Kuthatha inkalipho ukuthatha eli nyathelo. Iphupha lesicelo somtshato lithembisa ekutolikeni ngephupha ukuba inkalipho iya kuvuzwa.
Ngubani ngoku utshintsho izicwangciso, wamkela ngesimboli sephupha "isindululo somtshato" umqondiso wokuba umzuzu ulunge kakhulu. Kuba umbuzo wokutshata uhlala usandulelwa sisigqibo sokuvumela into entsha ebomini.
Kwincazelo yephupha, iphupha apho umntu abuza umntu isandla sakhe okanye azibuze yena, libonisa ukuba iphupha linengqondo eyoneleyo yoxanduva kunye nokuqiqa ukubala umngcipheko wotyalo-mali okanye isiqalo esitsha emsebenzini.
Uphawu lwephupha «isindululo somtshato» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo, iphupha lidla ngokufuzisela "isindululo somtshato." Uloyiko lokuphulukana. Lowo uphuphayo woyika ukuhlala kwaye abone emtshatweni kunye nelokhwe yomtshato inzuzo ekhuselekileyo. Uloyiko lokulahlekelwa ngumntu omthandayo lucinezelwa rhoqo, ephupheni livela kwi-subconscious.
Umnqweno, odla ngokucinezelwa phambi kwabanye, ukusondela emntwini kangangoko kunokwenzeka nokomeleza olu nxibelelwano kukwabonakaliswa kwisindululo somtshato. Ngayiphi na imeko, umntu ophuphayo kufuneka azibuze ukuba yintoni ebalulekileyo kuye kwaye abize ukungaqiniseki kwakhe.
Ngaphaya koko, isicelo kunye nomtshato olandelayo ephupheni nawo abonisa a fusion ehambelanayo. Oko kunokuthetha ekutolikeni kwamaphupha ukuba iingxaki ezithile zinokoyiswa. Isimboli yamaphupha iquka urhulumente owenziwe ngamaqela aphikisanayo ukujongana nawo ngaphandle koxinzelelo.
Ukuba iphupha liphendula kwisicelo ephupheni ngo "hayi" kubonakala kwisimboli yephupha duda isigqibo esenziwe. Usenokucengwa ukuba wenze into ongafuni kuyenza. Isimboli yephupha "isindululo somtshato" emva koko ekutolikeni ephupheni isimemo sokubeka zonke izicwangciso kuvavanyo kwakhona.
Uphawu lwephupha «isindululo somtshato» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya, uphawu lwephupha "isindululo somtshato" simele ukutolikwa kwephupha ukuzama kwendoda okanye inxenye yabasetyhini kubuntu ukunxibelelana nelinye iqela.
Los ibhalansi phakathi kwezibonda zombini yimfuneko yokulinganisela kwengqondo.